Ogaden News Agency (ONA) – Xarakada Xuuthiya iyo Isbadalka Ka Dhacay Dalka Yemen
Xarakada Xuuthiya iyo Isbadalka Ka Dhacay Dalka Yemen
Posted by ONA Admin	/ March 26, 2015
Indhaha caalamka wuxuu hadda kusii jeedaa isbadalka degdega ah ee ka dhacay dalka Yemen bishan gudaheeda. Dalka Yemen waa dalka inoogu dhow dalalka Carabta, isla markaana aynu wadaagno arima badan oo dhaqan, diin iyo wada-dhalashaba leh. Sidaa daraadeed, dhacdooyinka siyaasadeed iyo bulsho ee ka socda dalka Yemen waa lagama maarmaan inaan wax ka ogaano.
Xarakada Xuuthi, oo sanad ka hor ku koobnayd buuraha gobolka Sacda ayaa mar qudh ah la wareegay caasimadii dalkaa, isla markaana gacanta ku dhigay wax ka badan 80% agabkii uu lahaa Ciidanka Yemen iyo xeryhii ciidanka, inkastoo laba sana ka hor uu ka dhex socday dagaal xoogan xarakada Xuuthiga iyo Cidanka dalka Yemen. Qofka doonaya inuu wax ka ogaado xaalada dalka dagaalada sokeeye ee ka socda dalkaYemen, waa inuu marka hore fahmaa xarakada Xuuthi waxay tahay, goorta la asaasay, himilada ay leedahay iyo ugu dambayn xidhiidhka ay la leedahay dawladaha gobolka gaar ahaan dalalka Carabta.
Xuuthiyiinta waa koox Shiica ah oo ka asaasmay gobolka Sacda oo dhaca Galbeedka waqooyi ee dalka Yemen. Magaca Xuuthi waxay ka wataan asaasaha xarakada oo la odhan Xuseen Badradiin Al-Xuuthi oo dagaal lagu dilay 2004.
Xarakadan waxaa la odhan jiray markii hore (Shabaab Al-Mu’min) waxaan la asaasay 1990kii, hadafkoodana wuxuu ahaa inay xoojiyaan oo soo nooleeyaan madhabkii Saydiya ee waayadii hore xukumi jiray dalka Yemen, hasa ahaatee markii la riday nidaamkii Imaamka oo xukumay dalkaa in kabadn 1000 sano ayuu hoos u dhacay madhabka Saydiya oo ah madhab Shiica ah hasa ahaatee aan la wadaagin Shiicada Iiraan ee loo yaqaano 12banley (اثني عشرية) nacaybka badan ee khilaafadii iyo asaxaabtii Rasuulka CS.
Waxay sameeyeen Shabaabal Mu’min meelo ay dhalinyarada isugu keenaan oy kaga dhaadhiciyaan madahabka Saydiya. Dhalinyara badan ayayna sidaa ku kasbadeen oo tagi jiray xeryaha iyo naadiyada ay ka sameeyeen meela kala duwan. Dagaalkii uu Mareykanka ku qaaday dalka Ciraaq 2003 ayuu aad ugasoo horjeedsaday Xuseen Al-Xuuthi oo ka mid ahaa Shabaab Al-Mumin, waxayna bilaabeen gadood ku dambeeyay dagaal dhex mara iyaga iyo ciidankii Yemen, halkaasoo lagu dilay.
Maxay aaminsan yihiin Xarakada Xuuthiyiinta? Guud ahaan madhabka Saydiya waa madhab aad ugu dhow Sunada, gaar ahaan Shaaficiyada, kaliya waxay aaminsan yihiin inuusan Imaam (Xaakim) noqon karin qof aan kasoo jeedin faraca caruurta Faduma Bintu Rasuul CS oo ahaa Xassan iyo Xuseen RC. Masaajidda sunada iyo saydiyada way iskula tukadaan. Hasa ahaatee, saydiyada ayaa u kala baxday 12 firqo, kooxdan Xuuthiyada waxay ku tirsan yihiin madhab Gaaruudi oo Saydiyada ka farcama aadna xagjireen u ah oo aad u gaaleeya asaxaabta gaar ahaan Khulafadii Rasuulka CS ee Abuu-Bakar iyo Cumar RC. Waana meesha ay iska qoorasanayaan iyaga iyo Shiicada Iiraan. Asaasaha Xarakada Xuuthiya, Xuseen Badridiin Al-Xuuthi Badridiin Al-Xuuthi ayaa ugu tagay aabihii Sheekh Badridiin Al-Xuuthi oo ah sheekha xarakada oo masaafuris ku joogay Iiraan. Wuxuu Xussen joogay dalka Iiraan gaar ahaan magaalada Qum oo ah meesha ay fadhiyaan wadaadada Shiicada Iiraan dhowr bilood. Waxaa la aaminsanyahay inuu halkaa kasoo qaatey madhabka Shiicada ee 12banleyda loo yaqaano.
Intaa ka dib; awoodan la lodin la’yahay xagay ka heleen? Ugu horeyn dagaalka mudada dheer socday (6ex dagaal) ee dhex maray iyaga iyo ciidamada Yemen wuxuu ka dhigay maleesiyaad aad u yaqaana dagaalka noocyadiisa kala duwan, waxayna ku kasbadeen saaxiiba badan oo ciidanka ku dhex jira iyo bulshadaba. Xabad joojintii ay la galeen xukuumadda 2010kii iyo kacdoonkii dhalinyarada Yemen ee lagu riday xukunkii Cali Cabdalla Saalix wuxuu siiyay furasd fiican oy ku qabsadeen Waqooyiga Yemen. Waxaa la aaminsan yahay inay si hoos ahaaneed heshiis u wada galeen M/weynihii la eryay Cali C. Saalax oo doonayay inuu helo xoog uu ku caabiyo xisbiga Al-Islaax (Akhwaan) iyo shacabka kasoo horjeeda. Markii xukunka laga qaaday Cali Saalax, wuxuu go’aansaday inuu baabi’iyo xoogagii isku bahaystay, wuxuuna sii qaatay lacag aad u farabadan ($6 Billion) oo loo daayay isla markaana waxaa la siiyay xisaanad ah inaan maxkamad lasoo saarin. Muddo yar ka diba waxaa cadaatay in ciidanka ugu xooga badan Yemen oo ahaa Xarasal Jamhuuri iyo kuwa Taankiyada iyo kuwa Sawaariiqda iyo kuwa Cirka ay intaba ka amar qaataan isaga. Madaxweynihii loo dhiibay oo waligiiba ahaa ku xigeenka Cali Cabdalla Saalax M/weyne aan amri karin ciidankiisa sida Hailemariam Desalegn, R/wasaaraha Itobiya. Awooda dhabta ah ee Xuuthiyiinta waa ciidankii iyo taageerayaashii Cali Cabadalla Saalax oo shaadhka badashay. Xeryahii ciidanka iyo hubkoodii ayayna gacanta u galiyeen, waliba meeshii ku adkaata oy gali waayaan, waxaa u fura ciidanka raacsan Cali Saalax. Ilaa ay afaafka Cadan gaadhaan, halkaasoo lagu hortaagan yahay, oo ciidanka cirka ee dalalka Khaliijka Carabta ay ku weerareen xalay.
Hadaba, waxaa la sugayaa talaabada ku xigta oy qaadi doonaan is-bahaysiga Cali Cabdalla Saalax iyo Xuuthiyiinta iyo Shiicada caalamka oo Iraan ay hogaaminayso, waxaana laga baqayaa inuu dagaal Sunna iyo Shiica ah uu ka qarxo gacanka Khaliijka Carbeed.